Kungani ngingafuni ukusebenzisa Ubunye? | Kusuka kuLinux
Kungani ngingafuni ukusebenzisa Ubunye?
Sonke siyalazi ideski elisha le- Ubuntu, a shell ukuze I-Gnome kubizwa Unity nokuthi izuze uthando nokwedelelwa kwabantu abaningi.
Inhloso yalokhu okuthunyelwe akukhona ukukululaza, kepha ukumane ngikutshele okuncane ngobuhle nobubi obunakho ngokombono wami okungenani enguqulweni 11.04. Eqinisweni, kufanele ngikusho lokho mathupha: "Ngiyabuthanda Ubunye" kodwa kunezizathu ezinamandla kakhulu ezingiphoqayo ukuthi ngingazisebenzisi.
2 Ukuthi angikuthandi?
3 Futhi lezi yizizathu zokuthi kungani ngingafuni ukuyisebenzisa?
Isitayela "Mac" Bengilokhu ngiyithandile. Izinkinobho zephaneli ephezulu, kanye nemenyu yamathuluzi wokufaka izicelo kimi ngesinye sezinqumo eziphumelele kakhulu zabaklami be Unity. Kulungile, yikhophi ye- Mac OS, kepha akunakuphikwa ukuthi umphumela unethezekile futhi usisindisela isikhala esikrinini.
Noma kunjalo, kuma-betas we I-Oneric siyabona ukuthi manje inkinobho enelogo Ubuntu Iya ku Nokho, (noma isiqalisi, njengoba uthanda), futhi yize ngingakazami, angiwuthandi umqondo kakhulu. Mhlawumbe ngisazivumelanisa nomuzwa wokuthi lapho sichofoza kuyo, sizothola imenyu. Ngokuphikisana ne- IGnome-Shell, lapho sidinga ukusebenzisa i- Nokho,, lokhu kuboniswa ngenhla kwewindi esivule ngakho-ke, akulahli ukugxila.
Izinto ezinhle ziphelile kimi. Into yokuqala engingayithandi usayizi wokuzenzakalelayo wefayela le- Nokho, ezikrinini ezingasikrini esibanzi. Umuzwa wokuthi anginasikhala kokuqapha nokuthi ifayela le- Nokho, Yibha enkulu ngokweqile futhi igcwele imibala, ayiveli nezinqumo eziphansi kusuka ku-1024 × 768.
Iqiniso lokuthi uphoqelekile ukusebenzisa I-Compiz ngesinye sezizathu eziqinile zokuthi kungani ngingafuni ukusebenzisa Unity. Mhlawumbe ngolunye usuku ngizoba nokuhle PC enezici ezinhle kakhulu, kepha manje anginayo. Empeleni kuphela PC enginakho kungumsebenzi wami futhi kwesinye isikhathi nginawo 1GB ulungile kimi. I-Compiz ilawula cishe yonke into njengokuthi ubani othi. Kungani bengenzi i- Isikhungo Sokuphatha ukuze Unity lapho ungamisa khona usayizi wefayela le- Nokho,, okusobala nakho konke okunye? Konke lokho kuya ngokuthi I-Compiz kulokho engikubonile futhi ngiyakuphinda, akusizi kimi.
Ukukhuluma nge Nokho, Ngubani othe ngisebenzisa imgqomo kadoti? Kungani bangiphoqa ukuthi ngiyibambe lapho ngaphandle kokuhamba? Futhi okufanayo ngamadeski. Kuthiwani uma ngifuna ukuba ngaphezu kuka-4, noma ngingenakho? Futhi lelo nani lemibala ezenzakalelayo angicabangi ukuthi kuyinto yobuhle nakancane, ngaphezu kwedeski lobuchwepheshe, lisho into ethile yobuntwana.
Uma sikhuphuka kancane, ngakwesokudla (indawo yokwazisa), sizobona ukuthi ngesikhathi esifushane kakhulu ngeke kube khona enye inkomba. Kulungile ukufuna ukukuhlanganisa konke kumageji, kepha lokho kwenza amamenyu abe makhulu kakhulu abheke phezulu ngokunambitha kwami. Futhi, ngithanda ukusebenzisa ugqoko nokuthi izinhlelo eziningi zincishisiwe kuwo, ngakho-ke iphaneli ephezulu izobe igcwele izithombe.
Angiyithandi nendlela inketho ekhonjiswa ngayo Gijima uma ngicindezela I-Alt + F2 Yini eyayingalungile ngebhokisi elincane elidala ngomlando walo wokwehla?
Lokho akushiwo indlela izicelo manje okufanele zitholwe ngayo.Lens ubiziwe? Noma kunjalo. Ukuchofoza okuningi nokucindezela okhiye kakhulu. Ku- I-Gnome 2 isibonelo, ukuvula uhlelo lokusebenza:
Imouse chofoza kumenyu Aplicaciones.
Faka igundane (ngaphandle kokuchofoza) Izesekeli bese uyihambisa ku I-Gedit.
Chofoza ku- I-Gedit.
Okungukuthi, ukuchofoza okungu-2 nokuhamba. Manje in Unity:
Chofoza kusithonjana Ubuntu (noma nge Windows).
Thayipha lokho ofuna ukukucinga (kuleli cala I-Gedit).
Uyitholile? Chofoza isithonjana.
Ukuthayipha nje kuyinkinga. Futhi ungangitsheli ukuthi ngingangeza isiqalisi kuyo Nokho,, ngoba uma ngifaka konke engikusebenzisa lapho, khona-ke uhlu lwezithonjana luyoba lukhulu futhi kuzodingeka ukuthi bapheqe kakhulu ukuthola engilifunayo. Yize kufanele ngivume ukuthi indlela yokuyifaka ilula impela.
Futhi lezi yizizathu zokuthi kungani ngingafuni ukuyisebenzisa?
Ngokwengxenye yebo, kepha akuyona ebaluleke kunazo zonke. Isizathu esikhulu engingafuni ukusisebenzisa Unity, kungenxa yokuthi ngiphoqelekile ukusebenzisa Ubuntu. Anginalutho olukhethekile ngokumelene nale distro, kepha angifuni ukuthi ngizigqilaze ngayo ngokusebenzisa into engiyithandayo. Kule nkinga IGnome-Shell inenzuzo, noma ngabe ikhona Fedora, Mageia, vulaSUSE o Debian, singayisebenzisa ngaphandle kwenkinga kunoma iyiphi yazo. Eqinisweni, angiqondi ukuthi kanjani Debian, okuyilapho ivela khona Ubuntu, ayikwazi ukusetshenziswa.
Unity ithuthuka usuku nosuku futhi yenza okungcono Ubunye 2D thola nezibuyekezo zakho ezinhle ze- I-Oneric o Ubuntu 12.04, kepha le nguqulo ku QtKuze kube manje inginikeze ezinye izinkinga ezincane ngakho-ke ngingasho ukuthi iseluhlaza kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Kungani ngingafuni ukusebenzisa Ubunye?
Bengihlala ngithanda isitayela se- "Mac".
Lowo ongitshele lapho iMalcer ngemuva kwelangabi "Kepha uma usebenzisa iMac OS X, evalwe kakhulu emhlabeni" nangaphezulu ngaphandle kokuyisebenzisa JAJAJAJAJA
Leyo yinkinga, ngiyazonda amakhophi asobala ento ethile, yingakho ngingeke ngize ngizame i-Unity noma ngabe bayidlulisela kwamanye ama-distros
Yilokho kokuthandwa, imibala. IMac ingavalwa kakhulu, kuyiqiniso, kepha engikuthandayo akuyona uhlelo, kepha ukwakheka kwesixhumi esibonakalayo nokuhlelwa kwezinto esikrinini. Kukhona umehluko.
Ngeshwa ubumbano lwangikhumbuza ngamawindi eminyakeni eminingi eyedlule, ubunye yindawo engeke ilungiswe futhi ayiyinhle; okwamanje nginamatheli nge-linuxmint (gnome2.3) kanye ne-sabayon ene-xfce.
Futhi nginomshini one-1 gig yenqama, angidingi enye futhi ngithanda okulula nokuhleleka.
Yebo, kungenye yezinto engikhathaza kakhulu nge-Unity, ukungakwazi ukuyenza ngokwezifiso kakhulu. Angikwazi ukuhambisa idokodo, engeza iphaneli, noma kunjalo .. Kuyakhathaza !!!
Umbuzo owodwa, uma ngisebenzisa ubunye njengawe, kungani isithonjana sobumbano esiluhlaza singaveli njengawe emiyalezweni yami?
Eh elav, ngabe ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza kuhamba kanjani ebunyeni? Uma ngenkathi iGnome 3 isanda kuphuma futhi Ubuntu ivele yaphuma nobumbano futhi yadla ngaphezu kwe-gnome ngegobolondo layo, ukusetshenziswa kwe-gnome bekuthuthuka, ubumbano buhamba kanjani?
Empeleni ngibuyele emuva ku-LMDE ngoMgqibelo, angikwazi ukukusiza ^^ kepha ngizokutshela ukuthi ukusetshenziswa kwakho kokubili kulingana, okungenani ezivivinyweni engizenzile. Ngizobona uma ngibhala okuthunyelwe ngikhuluma ngale ndaba 😀
Kuyalingana? Ngabe uke wazama i-gnome 3.2 rc? kuhle nje lapho kuphuma u-3.2 othuthukisa ukusetshenziswa yize kusamele bakwenze kulokho. uhm kuzofanele ngilinde i-ubuntu 11.10 iphume bese ngiyizama ukubona ukuthi isebenza kanjani.
Ngokusobala angizange ngivivinye i-RC yeGnome 3.2. Isebenza kanjani? Ngiyethemba kanjalo, ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bazokwengeza izinsiza eziningi.
Yebo, ngobumbano nginethezekile, inkinga engiyibonayo kuphela ukuthi abasivumeli ukuthi sihambise ibha yesayithi, kepha uyakujwayela, kuyiqiniso futhi ukuthi akukwazi ukwenziwa ngezifiso kepha into ukuthi asisebenzisi ikhompyutha ukuhamba ngokwezifiso zonke izinto nge-2 × 3 uma singenzi izinto ezikhiqizayo, futhi ngobunye nginethezekile futhi uma umgoqo wesithonjana ungashintshwa izinhlangothi kungaba yi-hoot